कांग्रेस ५९, एमाले ६८ र माओवादी केन्द्रका ७५ जना मन्त्री (हेर्नुहोस् विस्तृतमा)
ARCHIVE, NEWSPAPER » कांग्रेस ५९, एमाले ६८ र माओवादी केन्द्रका ७५ जना मन्त्री (हेर्नुहोस् विस्तृतमा)
११ बैशाख ०६३ मा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । जनआन्दोलनमा सहभागी सात दल तथा १० वर्षे विद्रोहमा रहेको माओवादीसँग शान्तिसम्झौता भयो । अन्तरिम संविधान जारी भएपछि माओवादी पनि सहभागी भएको कोइराला नेतृत्वकै सरकारले संविधानसभा निर्वाचन गरेको थियो ।
११ जेठ ०६६ मा एमाले नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा कांग्रेस, राप्रपा, फोरम, माक्र्सवादीलगायत अन्य साना पार्टीहरूसमेत सहभागी भएर सरकार गठन भयो । माओवादी विपक्षमा थियो । नेपालले सातपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै एक वर्ष आठ महिना सरकार चलाए । २३ माघ ०६७ मा नेपाल नेतृत्वको सरकार प्रतिस्थापन गर्दै एमालेकै तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो ।
माओवादी, फोरमलगायतका दलको समर्थनमा खनाल प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा १७ पटकसम्म पनि संसदमा निर्वाचन भयो । कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल, माओवादीका प्रचण्ड र एमालेका झलनाथ खनाल चुनावी मैदानमा थिए । तर, अन्तिममा माओवादीको समर्थनमा खनाल प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए । खनालले दुईपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै सात महिना सरकार चलाए ।
१ चैत ०६९ मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई दलहरूले सरकारको नेतृत्व सुम्पिए । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराउन बनाइएको सो सरकारमा कर्मचारी सम्मिलित ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् थियो ।
२९ माघ ०७० मा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि कांग्रेस पहिलो पार्टी भएको थियो । संसदमा दोस्रो स्थानमा रहेको एमालेलगायत दलहरूलाई साथ लिएर कोइरालाले सरकार बनाएका थिए । उनले एकपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे, एक वर्ष आठ महिना सरकार चलाए ।
२१ जेठ २०७४ मा नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि व्यवस्थापिका–संसद्मा निर्वाचन हुँदैछ । कांग्रेस, माओवादी, राप्रपा, लोकतान्त्रिक फोरमलगायतका दलको गठबन्धनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुँदैछन् ।
कांग्रेस १० वर्षयता चारवटा सरकारमा सहभागी भएको छ । दुईवटा सरकार कांग्रेसकै नेतृत्वमा गठन भएको थियो । अब आफ्नै पार्टी सभापति देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुँदा ५ औँ पटक कांग्रेसको सत्तारोहण हुँदै छ । चारपटकको सत्तारोहणका क्रममा कांग्रेसका ५९ नेता मन्त्री भएका छन् । त्यसमध्ये विमलेन्द्र निधि, डा. रामशरण महत, डा. प्रकाशशरण महत, बालकृष्ण खाणलगायतका नेता दोहोरिएर मन्त्री बनेका थिए ।
दश वर्षमा ६ पटक सरकारमा रहेको माओवादीले दुई पटक आफ्नै नेतृत्वमा सरकार चलाएको छ । यसबीचमा माओवादीका ७५ नेता मन्त्री बनेका छन् । अब सातौंपटक कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा माओवादी सहभागी हुँदैछ । कृष्णबहादुर महरा, गिरिराजमणि पोखरेल, जनार्दन शर्मा, अग्नि सापकोटा लगायतका नेताहरु दोहोरिएर मन्त्री बनेका छन् ।
दश वर्षयता काग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रकाबाहेक अन्य दलका ४८ नेता मन्त्री वनेका छन् । मधेस केन्द्रित दल, नेकपा माले, राष्टिय जनमोर्चा, नेकपा माक्र्सवादी लगायत दलका नेता मन्त्री भएका हुन् । नेताहरु उपेन्द्र यादव, विजयकुमार गच्छेदार, प्रमेबहादुर सिंह, एकनाथ ढकाल लगायत नेताहरु दोहोरिएर मन्त्री बनेका छन् ।आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।